Zavatra Tokony Helohina. Angatahan’ny Filohan’i Shina Ho Boloky Mpampita Ny Tondrozotran’ny Antoko Ireo Mpampahalala Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Zavatra Tokony Helohina. Angatahan'ny Filohan'i Shina Ho Boloky Mpampita Ny Tondrozotran'ny Antoko Ireo Mpampahalala Vaovao
Voadika ny 23 Febroary 2016 3:35 GMT
Sorabaventy mivaky hoe: “CCTV mifikitra amin'ny tondrozotran'ny antoko. Raisinay an-tanandroa ny kiana avy aminareo, amin'ny tsy fivadihana tanteraka.” Sary avy amin'i fangshimin mpampiasa Twitter
Nitsidika mediam-panjakana telo lehibe ny Filoha Shinoa Xi Jinping nandritry ny faran'ny herinandron'ny 19 Febroary teo, nanindry ho an'ireo mpiasa tamin'ny kabariny hoe izay rehetra fikambanana fampahalalana vaovao miankina amin'ny Antoko Kaominista Shinoa sy ny governemanta dia tsy maintsy manaraka an-tsakany sy andavany ny tondrozotran'ny antoko any anatin'ireo tatitra, zava-misongadina, lahatsoratra ary hatramin'nhy dokambarotra ataon-dry zareo.
Notetezin'i Xi ny China Central Television (CCTV), ny People's Daily sy ny masoivohom-baovao Xinhua. Haingana be taorian'ny fitsidihany, niely be tety anaty aterineto ny iray tamin'ireo sary nalaina tao amin'ny biraon'ny CCTV. Asehon'ilay sary ny fomba nandraisana an'i Xi taminà sorabaventy iray milaza hoe , “CCTV mifikitra amin'ny tondrozotran'ny antoko. Raisinay an-tanandroa ny kiana avy aminareo, amin'ny tsy fivadihana tanteraka.”
Tsy zava-miafina intsony ny hoe miasa ho toy ny mpitondra tenin'ny antoko ireo mpampahalala vaovao telo ireo, saingy ny fanambaràna fanompoana mivantana tahaka izao no nahazendana, indrindra indrindra fa tahàka ny fanesoana/fanalana baràka ny tena ihany ilay izy. Tao amin'ny Twitter, nampihomehy an'i Hu Jia, Shinoa mpanohitra ara-politika, ilay tsy fihambahambàna :
难得说句实话，CCTV承认自己姓党。荣耀接受 #习特勒 “检阅”，笔杆子和枪杆子、刀把子实质都是党卫军。#Xitler pic.twitter.com/gThm40mZsk
— Hu Jia 胡佳 (@hu_jia) February 19, 2016
Anatinà fotoana iray tsy fahita firy, milaza ny marina ny CCTV hoe mifikitra amin'ny tondrozotran'ny antoko, ary hoe voninahitra ho azy ny mandray kiana avy amin'i #Xitler [fampitambarana ny hoe Xi sy ny Hilter]. Mpiambina mahatoky ny antoko daholo ny penina, ny basy ary ny sabatra.
Kanefa, ho an'ireo mahalàla tsara ny tantaran'ny antoko, tsy fahombiazana no ijerena ilay kabarin'i Xi raha jerena ireo ezaka fanavaozana nataon'ilay mpitarika fahiny Deng Xiaoping, tamin'ny 1980. Deng, izay nizaka ny vokatry ny ady ideolojika nandritry ny revolisiona koltoraly tamin'ny 1960 sy 1970, dia nandronjona ny fomba fitondra ireo media tao Shina, tamin'ny fanomezana toerana ho an'ireo fikambanana miaraka amin'ny antoko sy ny governemanta ho afaka mitantana trano fampahalalàna vaovao.
Somary voakorontana nandritry ny fotoana fohy noho ireo hetsika Tiananmen io fanalalahana io, saingy ny fiandohan'ny 1992 dia nanomboka nivarotra ny vaovaony ny antoko mba hanairana ny fanjifàna ny vokatra sy ny kolontsaina avy ao an-toerana, ary somary namàha kely ny fifehezany ideolojika mivantana an'ireo vontoaty mba hahafahan'ireo rafitra ara-barotra hivelatra. Raha mbola mifamatotra hatrany amin'ny antoko sy ny fanjakàna ireo trano fampahalalana vaovao, lasa hery lehibe roa manandanja ho an'ny sehatry ny media mikirakira ny ara-barotra ao amin'ny firenena ny fitantaràna miainga amin'ny zavamisy sy ny zavatra takian'ny tsena.
Izany no antony tsy nahavitan'i Ren Zhiqiang, mpanorina trano ary mpikambana tao amin'ny antoko, fa efa misotro ronono, ny tsy hanakiana ireo fanambaran'i Xi Jinpin ka nilazany fa ny tondrozotran'ny antoko no fotokevitra mìbahana toerana any anatin'ireo hetsiky ny media mpampahalàla vaovao. Miaraka amin'ny fanontaniana iray ny fanehoankeviny momba ilay vaovao, narahany fanehoana hadisoam-panantenana :
Hatramin'ny oviana no nanovan'ny governemantam-bahoaka ny anarany ho governemantan'antoko? Avy amin'ny tsipaipaikan'ny antoko angaha ny volan'izy ireo?
Rehefa miasa ho amin-javatra hafa ankoatry ny tombontsoan'ny vahoaka ireo mpampahalàla vaovao, dia tsy raharahaina sy adinoina ny vahoaka.
Tsy ela dia voasivana ny zavatra nalefany, ny hany dindo sisa hita tamin'izay nolazainy dia ny fanehoankevitra manondro azy ho mpanohitra ny antoko. Ny ankamaroan'ireo fanehoankevitra manakiana ny momba ilay fifikiran'ny media amin'ny tondrozotran'ny antoko dia, na voafafa, na notakonana tao amin'ny Weibo, ilay sehatra media sosialy Shinoa malaza be. Any amin'ireo sehatra toy ny Twitter no hany ahafahana mahita ireo fanoherana ara-bakiteny, izay tsy arahan'ireo Shinoa mpanivana.
Rehefa namaky teny antsefantsefan'ny andàlana teny, nino i Westmoon, mpampiasa Twitter, fa midika “fanompoana an'i Xi” ilay lazaina fa “tsy fivadihana amin'ny antoko” raha ny marina :
— Westmoon (@westmoon) February 21, 2016
Ny fanazavana momba ny fandraisana fitenenana amin'ny anaran'ny antoko, ny fifikirana amin'ny tondrozotran'ny antoko ary ny famelabelarana lavabe sy poakaty nataon'i Xi Jinping dia samy miresaka fanohanana an'i Xi Jinping daholo. Tsy misy resaka fifikirana amin'ny tondrozotran'ny antoko, fa fifikirana amin'i Xi fotsiny ihany. Tsy mbola tapitra akory ny fotoana fiasàn'i Xi Jinping dia efa mametraka fahefana matanjaka tahaka izany sahady izy amin'ny alàlan'ny fanentanany momba ny ady amin'ny kolikoly. Ary dia ho toy ny olona tsara izy rehefa tafiditra amin'ny fepotoana faharoa hiasàny.
Raha i @Zodiac4698 kosa taitra tamin'ny fomba fitenin'ny tafika hoe “matso” (review):
— 小悲 (@Zodiac4698) February 19, 2016
Ny teboka eto tsy hoe ny fifikirana amin'ny tondrozotran'ny antoko, fa ny teny hoe “matso”. Midika io fa toy ny andian-tafika iray ao anaty ady ideolojika ireo mpitondratenin'ny antoko, ady iray ny fampielezankevitra (vaovao lainga sy foronina). Iza no miaramila ary iza no fahavalo? Ny ady atrehana dia izay atao amin'ny saina, ny fahatsapan'ny maro, ny rariny, ny lojika ary hatramin'ny fitserana ireo iharan'ny tsy rariny. [Ary ny fandreseny] dia hamely ny maha-olombelona.
Badiucao, mpanao sariitatra politika, dia naneho ny fampahalalàna vaovao ho toy ny rajàko (hou, mitovy amin'ny fanononana ny teny hoe “vava” sy “traotraoka” amin'ny fiteny Shinoa iraisana) ary bibilava (she, mitovy fanonona amin'ny hoe “Lela” amin'ny fiteny Shinoa iraisana):
#巴丢草 漫画 【喉舌姓党】习大大幸临央视，喉舌们涕泪高潮。有的忙着改姓，有的不敢洗手，一派盛世，好不热闹。#习近平 #央视 #cctv #喉舌 #党 pic.twitter.com/yHBuMz4IDO
— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) February 21, 2016
Sariitatr'i Badiucao : Mpitondratenin'ìny antoko: “Dadatoa Xi” nitsidika ny CCTV, jambenan'ny ranomaso daholo ny rajàko sy ny bibilava. Ny sasany sahirana nanova ny anaram-pianakaviana [ho ny an'ny antoko], ny sasany nandà ny hanasa ny tànany [taorian'ny nandraisany ny tanàn'i Xi]. Toy ny fotoana iray naharavoravo sy feno fifaliana iny. #XiJinping #CCTV #mouthpiece